Katrok’ady malalaka :: Handray anjara voalohany amin’ny lalao maneran-tany “MMA” ny Malagasy • AoRaha
Katrok’ady malalaka Handray anjara voalohany amin’ny lalao maneran-tany “MMA” ny Malagasy
Sambany. Manomana mpikatroka amin’ny taranja katrok’ady malalaka na MMA (Mixed Martial Arts) ny delegasiona malagasy hiatrika ny lalao menaran-tany any Singapour amin’ny 18 ka hatramin’ny 23 novambra izao. Nanazava Rakotonindriana Parfait
Andriantsiory , mpanazatra ny ekipam-pirenena , fa “efa ela no nikarakarana ny fan­drai­sana anjaran’ny ekipa nasio­naly amin’ny fifaninanana goavana”.
Telo lahy sy vavitokana no mandrafitra ny ekipam-pirenena. Rafidisalama Zoarivony Jessica Henintsoa (-56,7kg), Razafindrakoto Sitraka (-61,2 kg), Rakoto­maria Tsinjofiniavana Nomenjanahary (-65,8kg) ary Ramamonjiarivelo Patrick (-70,3 kg).
Niditra avy hatrany tamin’ny fampivondronana izy ireo, taorian’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara tamin’ny 5 oktobra lasa teo. Mizara roa ny fanomanan’ireo mpikatroka, hoy ny mpanazatra, ka misy ny fiarahany amin’ny ekipa rehetra sy ny fanazarantenany manokana any amin’ny kliobany.
Fandalinana hatrany ny taranja no loka ho azon’ireo mpandresy amin’io lalao maneran-tany io, ankoatra ny medaly. “Tanjon’ny delegasiona malagasy ny hahazoan’ny iray amin’ireo atleta an’ilay vatsim-pianarana amin’ny taranja, miampy
fiofanana matihanina”, hoy hatrany ny mpanazatra ny ekipam-pirenena.
Tombony lehibe ho an’ny delegasiona malagasy ny fananan’izy ireo an-dRamamonjiarivelo Patrick, izay mikatroka any Frantsa. Nanambara ny mpanazatra fa “nanaraka hatrany ny fanazarantenan’i Patrick hatrany na any ivelany aza izy. Nosafidiko izy handrafitra ny ekipa noho ny zava-bitany hatramin’izay”. Nanampiny fa “manana ny haavo teknika tokony hiatrehana ny lalao ma­neran-tany ireo atleta rehetra, na vao tamin’ny taona 2014 aza no nekena am-bava ny fisian’ny taranja teto an-toerana ka nivelarany”.
Fibatana fonjamby- Afrika :: Niravona ny olana ara-bolan’ny Federasiona
Tetikasa Tana-Masoandro :: Mandroso ny fifampiraharahana amin’ireo tompon-trano sy tany